वार्तालाप:नेपालका उपत्यकाहरू - विकिपिडिया
विश्वकै होचो उपत्यका सङ्खुवासभा जिल्लामा पर्ने अरुण उपत्यका नेपाल मै पर्छ त्यसको उल्लेख विस्तृत गर्नु अत्यावश्यक छ जस्तो लाग्छ । ०४:३३, ३१ मे २०१८ (युटिसी(UTC))
स्रोत खोजेर उल्लेख गर्नेछु । धन्यवाद -- बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १७:१६, ३१ मे २०१८ (युटिसी(UTC))
सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि धेरै कम छ्न, मुख्य लेखको लागि पर्याप्त नहोला।-BRP ever ०९:११, ३१ मे २०१८ (युटिसी(UTC))
@BRPever: ज्यू, जहिले पनि अन्तिम समयमा प्रमुख लेख घोषित गर्नुपर्ने भएकोले केही त्रुटी त रहन्छ नै, त्यस बुँदालाई औल्याउनुभन्दा त्यसलाई समाधान गर्न तर्फ ध्यान दिँदा राम्रो हुने मेरो विचार रहेको छ । सबैले सहयोग गरे सुनमा सुगन्ध हुने थियो । अहिलेलाई थोरै भएपनि सन्दर्भ थपेको छु । धन्यवाद -- बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १७:१६, ३१ मे २०१८ (युटिसी(UTC))
@बिप्लब आनन्द: ज्यू, अन्तिम समयमा आएर त्रुटिपुर्ण (यो भनेको हैन) लेखलाई प्रमुख लेख बनाउनु त प्रमुख लेखको सोभा घटाउनु हो। मैले टिप्पणी मात्र गरेको हो, अब लेखमा प्रस्तापकहरुलाई यो कुराको कमि छ भनेको। मलाई यो बिसयमा ज्ञान छैन तर लेखमा प्रष्ट रूपमा कमि देखे पछी सल्लाह दिन खोजेको। हो समाधान गर्नु पर्छ तर आफुले गर्न नसक्ने तर मुख्य लेखमा हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्न खोजेको। मेरो बिचारमा लेखक या प्रस्तापकहरुले अरुको टिप्पणी सुन्न र लेखमा चित्तबुझ्दो सुधार गर्न तयार भएर प्रस्ताव गर्नुपर्छ र प्रमुख लेख त्रुटी मुक्त र पुर्ण हुनुपर्छ।-BRP ever १०:५५, २ जुन २०१८ (युटिसी(UTC))
@BRPever: ज्यू, हाम्रो विकिपिडियामा प्रमुख लेख महिनामा एक पटक परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । प्रमुख लेखको लागि आवेदन महिनाको अन्ततिर मात्रै आउने हुँदा (कहिलेकाहीँ सुरुवातमै) लेखलाई पूर्ण सुधार गरेर प्रमुख लेख बनाउने की त्यो निवेदन खारेज गर्ने? यदि खारेज गरिएमा अर्को लेख यथाशीघ्र कहाँबाट ल्याउने? प्रमुख लेख प्रस्तावकहरूको सङ्ख्या न्यून रहेको छ । अनेकौं कारणहरूले गर्दा आवेदन परेको लेखलाई प्रमुख लेख बनाउनुपर्ने वाध्यता छ । प्रमुख लेख पूर्ण हुनुपर्छ — एकदम सही कुरा उठाउनुभयो, त्यसैको लागि तपाईलाई प्रमुख लेख समन्वय समितिमा सदस्यता लिन आग्रह गर्दछु । धन्यवाद -- बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) ०४:१६, ४ जुन २०१८ (युटिसी(UTC))
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=वार्तालाप:नेपालका_उपत्यकाहरू&oldid=642580" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १०:०१, ४ जुन २०१८ मा परिवर्तन गरिएको थियो।